US Travel anabata Biden kwuru si eweli International Travel Mmachibido iwu na US
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » US Travel anabata Biden kwuru si eweli International Travel Mmachibido iwu na US
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Sayensị na-ekwu na US nwere ike mepee njem mba ụwa ugbu a n'enweghị nsogbu ọ bụla, ọkachasị maka mba ndị nwere nnukwu ọganiihu n'ịgba ụmụ amaala ha ọgwụ mgbochi.
Enwere ike ịmatakwu oge maka ibuli mmachibido iwu mba ụwa 'n'ime ọtụtụ ụbọchị na-esote.'
Site na nchedo kwesịrị ekwesị, ọmụmụ site na Ngalaba Nchedo US, Mayo Clinic na Mahadum Harvard ejirila aka ha chebe nchekwa nke njem ụgbọelu.
Kwa ụbọchị, ihe mgbochi ochie na njem na-emebi mba anyị.
Traveltù Na-ahụ Maka Njem US Onye isi oche ndị isi na Ọha na Ọchịchị Tori Emerson Barnes kwupụtara nkwupụta na-esonụ na okwu Onye isi ala Biden banyere ịmaliteghachi njem mba ụwa:
“Anyị na-anabata nkwupụta onye isi ala, nyefere ya na onye isi ala German bụ Angela Merkel, na ozi ndị ọzọ banyere oge maka ibuli mmachi njem mba ụwa nwere ike ịbịa‘ n’ime ọtụtụ ụbọchị na-esote.
“Sayensị na-ekwu na anyị nwere ike mepee njem mba ofesi ugbu a n’enweghị nsogbu ọ bụla, ọkachasị maka mba ndị rụgoro nnukwu ịda mba n’ịgbata ụmụ amaala ha. Site na nchekwa dị mma, ọmụmụ ihe site na Ngalaba Nchedo US, yolọ Ọgwụ Mayo na Mahadum Harvard ejirila aka ha chebe nchekwa njem ụgbọelu taa.
“Kwa ụbọchị, mgbochi mmachi na njem emeela ochie, na-emebi mba anyị, na-agbakwụnye nsogbu ndị mmadụ na ndị ezinụlọ ha na ndị ha hụrụ n'anya kewapụrụ. Mmachibido njem nke metụtara Canada, Europe na UK naanị na-efu akụ na ụba US $ 1.5 ijeri kwa izu-ezu iji kwado ọrụ 10,000 America.
"Ulo oru njem njem nke United States na-agba ndi ochichi Biden ume, dika sayensi ohuru, ka ha degharia atumatu ntinye ya na njem ndi mba ozo."